(Dhegeyso)-Odayaasha dhaqanka oo lagu Eedeeyay inay Ganacsi ka dhigteen Kufsiga Gabdhaha. | Puntland
(Dhegeyso)-Odayaasha dhaqanka oo lagu Eedeeyay inay Ganacsi ka dhigteen Kufsiga Gabdhaha.
Siihayaha Xeer-ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland,Maxammed Xareed Faarax oo goor dhoweyd shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa ka warbixiyay tacaddiyada kufsi ee saddexdii bilood ee la soo dhaafay ka dhacay afar gobol oo kamid ah sagaalka gobol ee Puntland.
Maxamed Xareed ayaa tilmaamay inay jiraan falal kufsiga la xiriira oo aan soo gaarin Maxkamadaha taasoo ay dhameeyaan Odayaasha dhaqanka , Waxaana uu sheegay sababaha kufsigu u sii kordhayo inay qayb ka tahay Eedaysanayaasha gaysta danbiyada oo sharciga aan la hor gayn iyo Odaaysha dhaqanka oo gabdhii kufsi loo gaysto ku Abaalmariya ninkii kufsaday oo loo guuriyo.
ku xigeenka Xeer ilaaliyaha guud Ee Puntland Maxamed Xareed faarax ayaa Eedayn u jeediyay Odayaasha dhaqanka waxaana uu tilmaamay in ganacsi ay ka dhigteen Xalinta Kufsiga ,Asagoo sheegay in talaabo ay ka qaadi doonaan .